10 Usoro Mgbasa Ozi Social nke na-akwalite mbak na ntụgharị | Martech Zone
Fraịdee, June 11, 2021 Wednesday, October 13, 2021 Rekha Pant
N'adịghị ka nkwenye a ma ama, mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze abụghị naanị na ị na-agbanwe agbanwe na ntanetị gị n'ịntanetị. Ga-ewepụta ọdịnaya nwere okike na mmetụta - ihe ga - eme ka ndị mmadụ chọọ ime ihe. O nwere ike ịdị nfe dịka mmadụ na-ekekọrịta post gị ma ọ bụ bido ntụgharị. Ihe ole na ole na-amasị gị na ikwu okwu ezughị. N'ezie, ebumnuche bụ ịrịa nje mana gịnị ka ekwesịrị ime iji mezuo nke ahụ?
N'isiokwu a, anyị na-atụle usoro mgbasa ozi mmekọrịta nke na-eme ka mmekọrịta gị na mgbanwe gị gbanwee. Kedu ka anyị ga - esi mee ka ndị mmadụ mee ihe banyere post anyị? Kedu ihe ga - eme ka ha chọọ ịkesa post ahụ? Anyị na-edepụta ụfọdụ ndụmọdụ ga-enyere gị aka:
Mụ mmadụ nwere mmụọ nke ibupụtara ndị ọzọ echiche ha. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike iyi ihe na-akpasu gị iwe, ịnwere ike iji nke a mee ihe maka ọdịmma gị ma duzie nyocha! Social media nyiwe na-enye a nghoputa ma ọ bụ nnyocha e mere na atụmatụ ka ojiji nke ahụ. Can nwere ike biputere banyere ihe dị mfe dị ka ihe bụ ebe ezumike ka mma, ihe ị ga-a drinkụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ha chere na ị ga-akpụ ntutu gị ma ọ bụ na ị gaghị. I nwekwara ike iji nke a ịmatakwu banyere ihe masịrị ha site na ịjụ maka agba, ọrụ ndị ha ga-ahọrọ karịa, ma ọ bụ ọrụ ha chọrọ. Ihe dị mma banyere nyocha bụ na ha na-abịa dị ka ajụjụ na-enweghị isi ka ndị mmadụ ghara ịtụ egwu ịnye ego ha abụọ.
Gwa ha ka ha sonye n'asọmpi
Ọtụtụ ndị na -ede blọgụ nwetara ndị na -eso ụzọ site na ịmalite asọmpi. Nke a na -akwalite ọnụnọ gị n'ịntanetị, ị ga -enwetakwa mgbanwe n'otu ntabi anya n'ihi na ndị ọbịa ibe gị kwesịrị ime ihe ka ha nwee ike sonye na asọmpi ahụ. I nwekwara ike iji ohere a kwalite ibe gị ma melite ọ bụghị naanị ihe na -amasị na ịkekọrịta kamakwa ọnụego mgbanwe.
Bido Q&A Sessions
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ka ihe ọmụma gị ka mma banyere profaịlụ nke ndị mmadụ na -eleta ma ọ bụ pịgharịa na -agafeghị posts gị, jide nnọkọ ajụjụ na azịza. Nke a na -arụ ọrụ n'ihi na ma ha kwenyere ma ọ bụ na ha ekwetaghị, ndị mmadụ na -ahụ ya n'anya n'ezie mgbe mmadụ jụrụ echiche ha. A na -emezu otu mkpa mgbe mmadụ jụrụ ha ka ha kọwaa ya. Nke a bụ ụzọ magburu onwe ya ị ga -esi ghọtakwuo ndị nọ na netwọkụ gị wee wepụta atụmatụ ga -enyere post gị ọdịnihu aka.
Nweta Foto ndị ahụ na-agagharị?
Site na nke ahụ, anyị pụtara, bulite vidiyo. Ihe onyonyo di oke nma, mana anyi agaghi aghapu na otutu ndi n’eji intaneti nwere mmasi karie vidio vidio. Dika nyocha nke ndi Social Media Examiner duziri anyi nile mara dika Facebook, ndi oru na eri oge otu narị nde na-ekiri vidio kwa ubochi. Jiri ohere a wee bulie ọnụego ntụgharị gị site na ị bulite vidiyo karịa!
Ebe E Si Nweta Foto: Echekwa Social
Zipu ozi ugboro ugboro
Y’oburu n’itinye otu ugboro n’izu, ya abughi ihe ijuanya na onodu i di n ’elu di ala. Ihe kachasị mkpa ị kwesịrị iburu n'uche bụ nke a: njikọ aka na mmekọrịta gị na mmekọrịta gị na njikọ nke ugboro gị. Ugbu a, ugboro a dabere na usoro mgbasa ozi mmekọrịta ị na-eji. Ọ bụrụ na ọ bụ Facebook, ịnwere ike biputere ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n’ụbọchị mana ọ bụrụ na ị na-eji Twitter, ị nwere ike biputere opekata mpe otu ugboro n’ime awa abụọ iji debe ọnụnọ gị na ntanetị.
Ebe ihe niile na-agba oke ọsọ ọsọ, ndị mmadụ enweghị ndidi. A na -ahọrọkarị nri ngwa ngwa karịa iri nri dị mma n'ihi na ndị mmadụ adịghịzi njikere ichere nri ha. Otu a ka ọ dịkwa maka ihe anyị biputere n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ọ dị oke okwu, tụkwasị obi na ndị mmadụ ga -agabiga ya. Iji dozie nke a, gbanwee edemede ahụ ka ọ bụrụ infographic. Ndị na -agụ na -enwekarị ọ representụ na -anọchite anya ozi n'ụdị n'ụdị ọnụ ọgụgụ dị iche iche, data, ma ọ bụ ntụnyere, yabụ infographic dị mkpa. Maka imepụta eserese, ị nwere ike dobe site na ngwaọrụ dịka Canva wee nweta mkpali maka otu esi emepụta infographics nke ọ bụghị naanị dọta uche kamakwa na -akwalite mgbanwe.
Ọchị bụ ọgwụ kacha mma
Onye ọ bụla chọrọ ezigbo ọchị mgbe ọ bụla wee bulite ihe ngosi GIF ma ọ bụ memes oge ọ bụla ị nwere ike. Ị nwere ike ime nke a iji mee ihe ọchị na post gị. Ugbu a, nke a abụghị naanị ime ka ndị mmadụ chịa ọchị; ọ bụkwa gbasara igosi ndị mmadụ na ị nwere ike ịbịaru nso na ị nwere ihe ọchị n'ime gị. Ndị na -akpa ọchị na -adị mfe mgbe niile ịkọrọ ha. Ọ ga -eju gị anya na ngwa ngwa na ntụgharị ga -abawanye ozugbo ị bulite meme.
Mee ka ọ dị mfe maka ndị mmadụ ịkekọrịta ozi gị
Otu mmejọ kachasị nke ndị nkwusa na-eme bụ bulite ọdịnaya ma tụọ anya ka ndị mmadụ chọta ebe bọtịnụ òkè dị. Ma ị nọ na mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ, jide n'aka na bọtịnụ ịkekọrịta mmekọrịta gị na-ahụ.
Dị Ọsọ Mgbe Replying Na-aza Ozi
Jide n'aka na ị na -aza ozi na nkwupụta ozugbo. Ndị mmadụ nwere obere nlebara anya, ha anaghịkwa enwe mmasị ma ọ bụrụ na mmadụ ewee ogologo oge ịza ajụjụ ha. Site na ịzaghachi ozi ozugbo, ị na -enye echiche na ị na -arụsi ọrụ ike n'ịntanetị yana na ị nwere ike igbo mkpa ha n'oge ọ bụla. Ị nwekwara ike rụọ ọrụ nzaghachi akpaaka iji mee ka ha mara na ị hụrụ ozi ha na ị ga-aza ha ozugbo ị dị. Nke ahụ ka dị mma ma e jiri ya tụnyere nke “hụrụ” na -apụta na igbe ozi n'ihi na nke ahụ ga -eme ka ha chee na ị kpachapụrụ anya na -eleghara ha anya.
Na-egosi Obiọma Mgbe Niile
Chee echiche banyere akụkọ mgbasa ozi ọhaneze ị na -eso. Gịnị mere i ji eso ha? Bụrụ ụdị akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta nke ị na -achọ inweta mmelite oge niile. Na -etinye aka na mkparịta ụka oge niile, ma na -akpado ndị mmadụ ị na -ehota n'ihi na nke a ga -eme ka ha chee na ị ji ha kpọrọ ihe ma kwanyere ha ugwu. Tinye ihe kachasị elu na okike ọdịnaya, kwalite ndị ọzọ ọkachasị ma ọ bụrụ na i chere na ọrụ ha bụ ihe ndị na -eso ụzọ gị ga -amasị. Na -emesapụ aka na ịkọ akụkọ, nghọta, ozi, ihe ga -aba uru nye ndị na -eso ụzọ gị. Mgbe ị naghị atụ egwu ịkwalite ndị ọzọ, ndị na -eso ụzọ gị ga -enwe nke a wee mee ka ha chọọ ịkekọrịta ọkwa gị karịa.
ngosi: Martech Zonenjikọ njikọ maka Canva na -eji n'isiokwu a.
Tags: mbo mbulintupoon'asọmpiọchịoyiyimụbaa mgbanweobiọmaInfographics Ahịapost ugboro oleQ & A sessionsajụjụ na azịza-ekere òkèihe osise soshal midianzaghachi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozinyocha